Uthole i-fleas ekati. Yini okufanele ngiyenze?
Ikhaya nomndeni, Izilwane ezifuyiwe zivunyelwe
Ama-fleas ekati (okuvame kakhulu kubhekwa njengeCtenocephalus telis) avela ngokuvamile kusuka othintana naye, ngisho nesikhathi esifushane, nesinye isilwane. Ngokuvamile, thina ngokwethu siletha izinhlanzi endlini ngezingubo noma izicathulo.
I-cat flea iyinambuzane engena-wing, enomlomo ophuza umlomo. I-taurus yalesi sifo sinyathelwe kahle ezinhlangothini, esinika ikhono lokuhamba ngokushesha phakathi koboya besilwane. Inezinhlangothi ezintathu zemilenze, njengabo bonke abameleli bekilasi lezinambuzane. I-back back inamandla kunawo onke, evumela ukuthi izimbungulu zifinyelele ibanga elide kakhulu. Izinambuzane zondla igazi, ngaphandle kokudla zingaphila kuze kube unyaka nonyaka. Iwesifazane ngezikhathi ezithile ibamba amaqanda angama-4 kuya kwangu-8, angabambeleli kuboya, kodwa awela phansi. Ngemuva kwezinsuku ezingu-12, i-larva iba umuntu omdala. Ukuze kuthuthukiswe izibungu, imvelo enhle yiziphephelo, idilika phansi, udoti. I-Larvae idla izinsalela zomzimba zezinambuzane ezindala. Ngesikhathi esifanayo, izintambo ezingafika ku-200 zingatholakala ekati elidala.
Ikoloni ekhula ngokushesha yezidumbu idala ukulimala okungenakuqhathaniswa nempilo yesilwane. Ukuqoqa izindawo zokuluma, izilwane, ukulimaza isikhumba nokuthelela amanxeba, okuholela e-dermatitis nokulahleka kwezinwele. Amacala okuphendula okweqile kuya emafeni avamile. Ezinganeni ezincane ezivela emisebenzini yezifo ezinambuzane kukhona i-anemia, ukuphelelwa yisikhathi kwamanzi, ukuphazamiseka kwegazi. Uma ungaqedi isilwanyana esincane ngesikhathi, ungafa.
Ama-fleas ekati: izimpawu
Isilwane esiteshini sokuqala saleso sifo sikwenza kucace kumnikazi ukuthi sihlushwa yizidakamizwa. Hlola ngokucophelela ukuziphatha kwesilwane sakho. Ukuhlunga kuqala ezindaweni ezinesikhumba esincane. Lona intamo nesisu. Ukuqina nokusabalalisa kwe-pruritus ngokuqondile kuxhomeke ekukhiqizeni izinhlanzi. Ikati iqala ukuhlaziya, ikhipha isikhumba, izama ukubamba ama-parasites ngamazinyo.
Ama-fleas ekati lezinhlanga ezingenasici
Ukungabikho koboya ekatini akuyikuvikela kumafleas. Yiqiniso, izidumbu azihlali ezilwaneni njengokulunywa. Thola izinambuzane ngale ndlela: gubha ngemuva kwesilwane ngethawula elimhlophe lephepha. Ukutholakala kwezinhlayiya ezinobomvu obomvu nemifula kufakazela ukuthi kukhona ama-fleas. Ukwelashwa kwenziwa ngendlela efanayo namakati ajwayelekile.
Ama-fleas ekati: izindlela kanye nezindlela zokulwa nezinambuzane
Uma izidakamizwa zitholakala esilwaneni sakho, kuyadingeka ukwenza uchungechunge lwezinambuzane zokusebenza: ukwelashwa kwesilwane, udoti, indawo yendawo yokuhlala, ukuvimbela ukubukeka kwefleas kumaqanda asebekiwe kanye nezibungu. Izinambuzane zanamuhla zinezinhlobo ezihlukahlukene zamakhemikhali: i-adulticide - into ebulala amafosheni namaphuphu amancane; Ama-Nerve agents; Kusho ukulahla ukuthuthukiswa. Ukuthenga izidakamizwa eziphikisanayo, ukutadisha izingxenye ezifakwe kuwo, ukuhlanganiswa kwesithako esisebenzayo, cabanga ngokuchasene (ukugula noma i-asthmatic, izingane ezincane endlini). Uma ukhetha i-insecticide ikati, khumbula ukuthi ikhambi lezinja alihambisani nesilwane sakho. Futhi, izimali zabantu abadala zihluke nezidakamizwa zefleas ngamakhitteni. Ukukhetha kahle i-agent ye-bullet yesilwane, funda i-spectrum yayo Izenzo nezinhlelo zokusebenza. Khumbula ukuthi ekubunjweni kwamakati, okuchazwe ngokweqile yizithako ezifana ne-amitraz, i-permethrin ne-organophosphates. Amadonsaza anesikhathi esanele sokwenza. Zifaka ngqo esikhumbeni noma ngengubo yezilwane phakathi kwe-scapulae. I-sprays isetshenziswa zonke izinwele zezilwane. Uma ufaka isicelo qinisekisa ukuthi umkhiqizo awutholi isilwane sakho semfucumfucu nesimungulu (amehlo, umlomo). Ngemuva kokwelashwa, kubalulekile ukuvuselela igumbi. Izinhlanzi ezivela ekati zingasuswa nge-shampoos.
Ithuluzi elikhulu lokuvimbela liyinkomba. Isetshenziselwa ukuhamba, kuhle ukugqoke unomphela emaphandleni noma uma uhlala endlini yezwe. Abahlengikazi bezilwane batusa ukwelashwa kwezilwane ngamaconsi noma ama-spray kusukela ngoMashi kuya kuNovemba nyanga zonke.
I-Pekingese: okuqukethwe nokunakekelwa, umlingiswa
Amakati: izinhlanga zamagundane. Izinhlobo zezinja ezihlobisa
"Amehlo e-Diamond": amaconsi amakati nezinja (imfundo)
Umngane wakho uyisisindo esincane
I-American Spaniel: incazelo yohlobo (isithombe)
Kuyini mumps? Izimbangela, ukwelashwa kanye nokuvimbela
Article 213 of Criminal Code of the Russian Federation nekuphawula. LESISIQEPHU SISPHANSI KO CWANINGO 1 h. 2 tbsp. 213 we Criminal Code
Theatre Winter (Sochi) - isikhungo yesimanje uhambo waseshashalazini
Kanjani ukuphoqa yena hhayi ubuvila waphinda futhi uthole ukunambitha impilo?
Jewel China - Oolong Tea